George Floyd Caddaalad Buu Rabaa? - Ninkii Madoobaa Ee Lagu Dilay Maraykanka Oo Saamayn Ku Yeedhay Ciyaarihii Maanta Ka Dhacay Jarmalka - Gool24.Net
George Floyd Caddaalad Buu Rabaa? – Ninkii Madoobaa Ee Lagu Dilay Maraykanka Oo Saamayn Ku Yeedhay Ciyaarihii Maanta Ka Dhacay Jarmalka
Dilkii argagaxa lahaa ee waddanka Maraykanka loogu geystay George Floyd oo nin Madow oo qaab naxdin leh uu u dilay sarkaal ka tirsan ciidanka booliska iyadoo muuqaallo laga duubayo, ayaa waxa uu saamayn ku yeeshay kulamadii horyaalka waddanka Jarmalka ee maanta.
George Floyd oo asal ahaan kasoo jeeday waddanka Maraykanka ayaa toddobaadkii hore ku geeriyooday Minneapolis markii uu Derek Chauvin qoorta kaga fadhiistay, waxana la maqlayay ereyadii ugu dambeeyey ee uu ku dhawaaqayay ka hor intii aanay naftu ka bixib, kuwaas oo qalbiga dhaqaajiyey dadka madow ee dalkaas ku nool iyo qof kasta oo kale ee dunida jooga.
Arrintan oo mudaharaad ka abuurtay Maraykanka, waxa ay hadhaysay ciyaartii maanta ee Schalke vs Werder Bremen ee horyaalka Bundesliga ee waddanka Jarmalka.
Weston McKennie oo ka tirsan Schalke 04 ayaa gacanta kusoo xidhay maro ay ku xardhan yihiin ereyo uu ugu doodayo George, isla markaana uu Maraykanka ugu baaqayo in caddaalad la siino muwaadinka sida xun loo dilay.
Weston McKennie oo u dhashay waddanka Maraykanka, ahna Afrikaan-Maraykan ayaa waxa uu gacanta kusoo qoray: “George caddaalad ha helo”, waxaana la arkayay isaga oo garoonka dhexdiisa ku ooyaya.
Ciyaartoygan oo ay da’diisu tahay 21 jir, ayaa kusoo koray Texas, waxaanu Maraykanka u saftay 21 ciyaarood, laakiin ciyaartan uu kusoo bandhigay taageereya George Foyd waxay kooxdiisu la kulantay guul-darro gurigooda loogu xambaariyey.
Xeer ilaalinta waddanka Maraykanka ayaa shaacisay in Chauvin oo Jimcihii loo xidhay dilka uu gyestay inuu qoorta kaga fadhiyey Foyd muddo siddeed daqiiqadood, 46 seken, illaa intii ay naftu ka baxaysayna uu ku fadhiyey isaga oo ku jees-jeesaya.
Xeer Ilaalintu waxa kale oo ay sheegtay in laba daqiiqadood iyo 53 seken oo ka mid ah siddeeda daqiiqadood ee uu Chauvin ku fadhiyey, in uu Foyd miyir la’aan ahaa oo uu koomo ku jiray, kaddibna ay naftu ka baxday.
Si kasta ha ahaatee, arrintan ayaa taabatay dunida oo dhan, waxaana cambaareeyey dad badan oo uu ku jiro Madaxweynaha waddanka Turkiga.